कोभिड संक्रमणविरुद्ध काकाकूल बनेको खोप ! – Kantipur Hotline
खोप ! खोप !! खोप !!! ‘‘देशको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप ।’’ उल्लेखित वाक्यमार्फत् खोपको महत्व दर्साउँदै यसलाई प्राथमिकीकरण गरेका थिए, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको पहिलो वैठकमा । विश्वासको मत पाएपछि प्रतिनिधि सभामा दलका नेताबाट बधाइ तथा शुभकामना दिने क्रममा उठाइएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे, ‘ऋण लगाएर वा सापट लिएर भएपनि जहाँ जहाँबाट पाइन्छ, जति महंगो भएपनि किनेर नेपाली जनतालाई खोप पुर्‍याउने प्रतिवद्धता गरेका छौं ।’ कूल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप लगाउने सरकारको तयारी छ । खोपमा परनिर्भर हुनुपर्ने वाध्यता नै नेपाल तथा नेपालीको समस्या हो ।
चीनको वुहानमा सन् २०१९को डिसेम्बरमा शुरु भएको कोभिड भाइरस आगोको डढेंलोे फैलिएसरी फैलिएर पूरै विश्व आतंकित बनेको थियो, यो रोगको पहिलो चरणको शुरुवाती दिनमा । अजंगको डर बसेर शरीरनै सिरिंग हुने, मानसिक तनाव बढ्ने क्रम अझै यथावत छ, मानव समुदायमा । उड्दा उड्दैका चरा जमिनमा झरेर मृत्युवरण गरेजसरी कोविड संक्रमित व्यक्ति हिंड्दा हिंडदैका मानिस पनि ढलेर मृत्युवरण गरेको, कोविड संक्रमणले छाति नै उचालिने गरी स्याँस्याँ र घ्यार्रघ्यार्र गरी सास फेरेको, अनौठो आवाजले बोलेको, सयौं लाशहरु एउटै खाल्डोमा पुरेको जस्ता दृश्य इन्टरनेटको सुविधाले तत्क्षण विश्वमा फैलिन सघायो भने दू्रतगतिको यातायातले संक्रमणलाई विश्वव्यापी बनाउन सघायो ।
भूसको आगोसरी विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड संक्रमणको औषधि तथा भ्याक्सिन पत्ता लगाउन, बनाउन चिकित्सकहरु दिनरात खटेका थिए भने अथक प्रयासपछि बेलायतले २०२० डिसेम्बरको पहिलो साता (२०७७ मंसिर तेस्रो साता) फाइजर खोपले मान्यता पायो । ९० वर्षीया मार्गरेट किनन कोविडविरुद्धको खोप लगाउने पहिलो महिला थिइन् ।
नेपालले कोभिड विरुद्धको खोप पहिलोपटक अभियान नै संचालन गरेर २०७७ माघ १४ गतेबाट भारतमा उत्पादित कोभिशिल्ड नामक खोप लगाएर शुरुवात गरेको थियो । नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर २०७६ माघ ९ देखि २०७७ चैत्र १ गतेसम्म महामारीको पहिलो लहर मानिएको छ भने चैत्र ११ गतेदेखि कडा लकडाउन गरिएको थियो । यस अवधिमा १७ हजार ५ सय २ जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो लहरमा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिबाट संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
दिनभर लाइन बसेर बिनाखोप फर्किनुपर्दा : साउनको चर्को घाम र झरीमा भिज्दै दिनभर खोपका लागि लाइन बस्ने तर साँझ परेपछि खोप सकियो भन्दै फर्काउने र फर्किने प्रवृत्ति देशभर नै देखियो । गर्मीको परवाह नगरी खोपका लागि भन्दै दिनभर लाइन बसेर साँझ खोप नलगाई फर्किनुपर्दा दुःख लागेको हेटौंडा-९ की रमिला सापकोटाले बताइन् । कोभिशिल्डको दोस्रो डोज लगाउन खोप केन्द्र पुगेकी उनलाई झण्डै ४ घण्टा लाइन बसेर पछि खोप सकिएको भन्दै फर्काइएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले गुनासो पोखिन् ।
भुगोल र जनसंख्याको आधारमा मागअनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा खोप वितरण गरिएको छ । जसमध्ये हालसम्म हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी खोप लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको योजनाअनुसार यस अभियानलाई सबै स्थानीय तहबाट निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । खोप अभियानमा अन्य जिल्लामा खोपको हाहाकार भए पनि मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा भने सबैले लगाईसकेको जनाइएको छ ।
कमजोर सुचना प्रणाली भ्याक्सिनको अन्यौल : डा. समीरमणि दीक्षितका अनुसार सरकारले पनि तदारुकतासाथ भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर एक वा दुई महिना भित्रमा धेरैभन्दा धेरैलाई भ्याक्सिन लगाउने ब्यवस्था गर्नु प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा खोप उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यो अवस्थामा जनतालाई अलमल गरेर जोखिममा राख्नुभन्दा बरु निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउने जिम्मा दिनु उपयुतm हुन्छ । किनकि अहिलेको आवश्यकता भनेको छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाएर सुरक्षित गर्नु हो । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिंदा कम समयमै धेरै खोप उपलब्ध गराउन सकिने र अहिले बजारमा ब्याप्त खोपको कालो बजारी र अनियमिततामा पक्कै कमी आउनेछ । साथै सरकारले अक्सिजन सप्लाई, वेड सप्लाई, लगायत कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री तयारी अवस्थामा राख्नु जरुरी छ ।
कमजोर खोप कुटनीति र व्यवस्थापन : परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको थिंक ट्यांक इन्स्टिच्यूट अफ फरेन अफेयर्स (आइएफए)का पूर्व प्रमुख डा. इन्द्र अधिकारीका अनुसार भ्याक्सिन आएर अरु देशमा वितरण भइसक्दा पनि हामीले पाउन नसक्नु भनेको तत्कालीन सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा चुकेकै हो । खोपलाई छिमेक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने टूल बनाएनौं ।
राष्ट्रपतिको पहल : परराष्ट्रविद डा. इन्द्र अधिकारीकाअनुसार खोप खरिद तथा सहयोगका लागि राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको पत्राचार गैर जिम्मेवार किसिमको थियो । उक्त पत्राचारले न राष्ट्रपतिको गरिमा जोगाएको छ, न देशको गरिमा बचाएको छ । उहाँको प्रश्न छ, हामीसँग यति धेरै संयन्त्र छन्- परराष्ट्र मन्त्रालय केका लागि ? राजदूतावास र राजदूतहरु केका लागि ? जब क्राइसिसमा अरु देशसँग डिल गर्न परराष्ट्रको संयन्त्र प्रयोग गर्दैनौं, भने त्यत्रो संयन्त्र के का लागि ? परराष्ट्रजस्तो निकायलाई सामान्य पोष्ट अफिसजस्तो गरी खेलाइएको छ । हरेक मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीअन्र्तगत हुने वित्तिकै त्यो त्यत्ति प्रभावकारी हुँदैन । परराष्ट्रका संयन्त्र पनि प्यारालाइज भए ।
परराष्ट्रको संयन्त्र धराशायी बनाउने सरकार : परराष्ट्रविद डा. इन्द्र अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित देशमा भएका राजदूतहरुले व्यक्तिगत पहल गर्ने कुरा यस्तो संकटमा संभावना कम रहन्छ । डा. इन्द्रको कथन छ, राज्यले नै राजदूतलाई म्यान्डेट दिनु पर्छ जबकि राष्ट्रपति नै अघि सरेपछि राम्रो भएन । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिको चिट्ठीलाई नै बेवास्ता गरिएको अवस्थामा राजदूतलाई कुन रुपमा लिन्छन् होला ? अर्को कुरा राजदूतावासलाई इम्पावर नै गरिएन । साथै मन्त्रालयलाई पनि इम्पावर गरिएन । सबै परराष्ट्रसँग सम्बन्धित निणर्यहरु प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत भए । प्रधानमन्त्रीको खटनपटनमा परराष्ट्र मन्त्रालय चल्ने भयो । त्यो भएपछि उसले आफ्नो विवेक, क्षमता, दक्षताको अभ्यास र प्रदर्शन गर्नै पाएन । परराष्ट्रलाई नै बाईपास गर्ने र थोपर्ने होइन । विज्ञता नभएकाले विज्ञहरुलाई थोपर्ने काम हुने, विज्ञहरुले त्यसरी होइन हजुर भन्न सकिरहेका छ्रैनन् । यो स्थितिले हामीले समयमा खोप नपाउने त छँदैछ, हाम्रा संरचनाहरुलाई धराशायी बनाउन पनि भूमिका खेल्यो । मन्त्रालय कमजोर भयो, मन्त्रालय कमजोर भएपछि मिशनहरु कमजोर भए र मिशन कमजोर हुने वित्तिकै उनीहरुले गर्ने अभ्यास कमजोर भयो ।
खोप आउनेक्रम बढ्दै : विश्वमा अहिले आएर खोपको उत्पादन दर पनि बढ्ेको छ भने नेपालमा पनि भ्याक्सिन आउने क्रम बढ्दो छ । साउन २८ गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराइएअनुसार सरकारले कोविड नियन्त्रणका लागि प्राथमिकतासाथ काम गरिरहेको छ । नेपाली जनतालाई पाँच करोड ५० लाख खोपको आवश्यकता पर्छ, जसमा १ करोडभन्दा बढी डोज खोप सुनिश्चित भइसकेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको कथन छ, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताअनुसार खोप आयातको दर बढाईएको छ ।’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ‘पहिलाको सरकारले ९७ लाख खोप प्राप्त गरेर १८ महिनामा ४२ लाखलाई खोप लगाइएको थियो । नयाँ सरकार आएपछि ७५ लाख खोप लगाइएको छ । वर्तमान सरकारले दैनिक एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखलाई खोप लगाउने गरेको छ ।’
कोविड संक्रमण तिब्र, खोप अभियान सुस्त : गतसाल अर्थात् २०७७ माघ १४ गते बुधबारदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस बिरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो । काठमाडौंस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज राजभण्डारीले कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप लगाएर खोप अभियान सुरु भएको थियो । अभियान सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अझै सर्वसाधारणको पहुँचमा खोप पुग्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । सरकारले विभिन्न देशबाट अनुदानमा तथा खरिद प्रक्रियाबाट खोप भित्र्याएर छिटोभन्दा छिटो सर्वसाधारण सबैको पहुँचमा खोप पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।
नेपालमा प्रयोग भएको भ्याक्सिन : नेपालीहरुले कोविड १९ विरुद्ध विभिन्न देशबाट आएको खोप लगाएका छन् । जसमा भारतको कोभिसिल्ड, चीनको भेरोसेल र अमेरिकाको जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप लगाए । यस्तै, जापानबाट अस्ट्राजेनिक खोप पनि आइसकेको छ भने भुटानबाट पनि खोप सहयोग आईसकेको छ ।
नेपालमा खोप अभियानको शुरुवात : नेपालले पहिलोपटक कोभिड विरुद्धको खोप अभियान २०७७ माघ १४ गतेबाट भारतमा उत्पादित अस्ट्राजेनिका नामक खोप लगाएर शुरुवात गरेको थियो, जसलाई कोभिड शिल्ड नामक ब्रान्डमा उत्पादन गरिएको हो । यो अभियानका लागी भारतले १० लाख खोप अनुदानका रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो । उतm समयमा २ लाख ७० हजार ९२ मानिसहरु कोभिड संक्रमित थिए । भने २०१७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
विभिन्न देशबाट प्राप्त खोप : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले साउन २८ गते प्रतिनिधिसभाको वैठकमा जानकारी गराएअनुसार नेपालका लागि पाँच करोड ५० लाख खोपको आवश्यकता पर्दछ । एक करोडभन्दा धेरै खोप सुनिश्चित भइसकेको छ । सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएर खोप आयात दर बढाइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ‘पहिलेको सरकारले ९७ लाख खोप प्राप्त गरेर १८ महिनामा ४२ लाखलाई खोप दिइएको थियो । नयाँ सरकार आएपछि ७५ लाखलाई खोप लगाइएको छ । वर्तमान सरकारले दैनिक एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख खोप लगाउने गरेको छ ।’ तर अगस्ट १५ सम्मको तथ्यांक केलाउदा ४३ लाख ३३ हजार ७२९ डोज खोप दिएको देखिन्छ । राज्यमन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार मोडर्ना ४० लाख, जोनसन एण्ड जोनसन खोप ५० लाख,फाइजर ४० लाख र अष्ट्राजेनिका २० लाख गरी कुल एक करोड ५० लाख मात्रा खरिद सम्झौता भइसेकेको छ ।
खोपको पहिलो मान्यता : कोभिड विरुद्धको खोपका लागि विश्वका थुप्रै कम्पनीहरु लागिपरे, विकास गरिए । जसमध्ये बेलायतले २०२० डिसेम्बरको पहिलो साता फाइजर खोपले मान्यता पायो । ९० वर्षीया मार्गरेट किनन कोविडविरुद्धको खोप लगाउने पहिलो महिला थिइन् । डिसेम्बरको दोस्रो साता अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनले आपतकालिन प्रयोगका लागि फाइजरलाई मान्यता दियो भने पछि मोडर्नाको खोपलाई पनि मान्यता दियो । यसपछि अन्य देशहरुले पनि फाइजरलाई मान्यता दिए ।
घिसिङको नियुक्ति ‘बदरको माग सहित शाक्य पुगे सर्वोच्चमा, बुधबार सुनुवाइ हुँने